အဓိက » သတင်း » ခေတ်ပြိုင်အနုပညာအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း
ခေတ်ပြိုင်အနုပညာနှင့်အနုပညာစျေးကွက်တစ်ခုချင်းစီကိုဖြတ်သန်းနေ့ရက်ကိုအတူတိုးချဲ့နေသည်. သင်တန်း, နည်းပညာအသစ်ကအနုပညာရှင်နှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်တွေ့ဆုံရန်အသစ်တစ်ခုကိုတွန်းအားပေးခဲ့တယ်. ဤသည်ပြပွဲနှင့်ပြတိုက်သွားရောက်သေချာပေါက်မဖြစ်, အသစ်က directory ၏လွှတ်ပေးရန်အတိုင်းလိုက်နာ: နှင့်ပစ္စုပ္ပန်နေ့ရှေးထံမှအနုပညာလောကီသားတို့သည်အရှေ့မှာပုံပေါ် - အင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်ဖို့လုံလောက်တဲ့. ရဲ့ခေတ်ပြိုင်အနုပညာအတွက်လက်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြစို့.
ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းကမ္ဘာပေါ်မှာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အမြင်ပုံရိပ်တွေ. ပုံရိပ်တွေယိုယွင်းနေသဖြင့်အောင်မြင်, ဒါခေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု Gluck, အနုပညာရှင်အကြားတစ်ဦးလူကြိုက်များလမ်းကြောင်းသစ် - အထူးသဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာထဲမှာ. ယခင်ကထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်များတတ်သည်, ပုံပျက်သောယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်နှောင့်အယှက်. သို့သော်ခေတ်ပြိုင်အနုပညာကိုအထက်အနည်းငယ်ခြေလှမ်းများအရှိန်မြှထားပါတယ်: အဆိုပါ, လက်ထပ်ရရန်အသုံးပြုဘယ်အရာကို, အခုဆိုရင်အထူးဖန်တီး. 2018 ခုနှစ် – အမှန်တကယ်အချိန်, ချို့ယွင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးယူပြီးသည့်အခါ.
တနည်းကား, ပန်းပု၏ပုံစံ, ဒါဟာဆယ်စုနှစ်လွန်ခဲ့တဲ့စိတ်ကူးဖို့မဖြစ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်. ယင်းအီလက်ထရောနစ်ပုံစံ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ, စက္ကူဗားရှင်း, ကံမကောင်းသဖြင့်, ဒါဟာအကောင်းဆုံးကာလကတဆင့်သွား. သို့သော်, အဆိုတော်များထို့နောက်ကွဲပြားခြားနားသောမျက်လုံးများနှင့်အတူကမ္ဘာကြီးကိုမြင်, အခြားသူများကိုရိုးရိုးဘာသာရပ်ကြောင်း, ထိုသူတို့အဘို့ကလက်ရာကိုဖန်တီးရန်ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်. စာအုပ်တွေ၏ပုံအဆောက်အဦးပစ္စည်းဖြစ်လာခဲ့သည်, ကမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကိန်းဂဏန်းများမွေးသောအရာထဲကနေ, ဖွဲ့စည်းပုံ. ပုံစံနဲ့ content တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဖြည့်စွတ်ခြင်းငှါသို့မဟုတ်, သို့မဟုတ်ပဋိပက္ခ, ပရိသတ်ကိုထံမှကွဲပြားခြားနားတုံ့ပြန်မှုထုတ်လုပ်.
တချို့ကအနုပညာရှင်တွေသစ်ပင်ပန်းမန်များနှင့်မန်များ၏ motif ဖို့ပိုနှစ်သက်, ရာခေလသည်ဥပမာ, Asha က (Rachael Ashe အဘိဓါန်), အခြား, Anouk Kruitof နဲ့တူ (Anouk Kruithof) ဒါဟာရိုးကိုပြိုကျနေတဲ့ပန်းပု created. ဖန်တီးမှုလူများအတွက်စက္ကူစာအုပ်များ၏အလွန်ပုံစံ, အဘိဓါန်, ကိုယျတှေ့မှတျတမျးတစ်မူဆယ်ဖြစ်လာခဲ့သည်. သူတို့လက်၌, ပရိသတ်ကိုလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောထောင့်နှင့်အတူတစ်ဦးစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်မနည်းလှသောအဆင်း.
ဒါဟာယူဆနိုင်ပါတယ်, ဤအလူထူးလူဆန်းအဖိုးကြီးရေးစပ်သီသို့မဟုတ်ရိုးရှင်းစွာ၏ဖန်တီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာကြီးထွားမ, သို့မဟုတ်ရိုးရိုးအလုံအလောက်မကစား. သို့သော်အနုပညာရှင်တွေပဲထင်ရှားတဲ့ရုပ်တုကိုမဖန်တီး, ရိုးရှင်းသောပင်လယ်ဓားပြသင်္ဘောများသို့မဟုတ်ရဲတိုက်, နှင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်စကေးနှင့်ပုံစံ, အသုံးချအနုပညာလုံးဝမရကလေးသည်တ္ထု.
နီးပါးတစ်ဝက်တစ်ရာစုလွန်ခဲ့တဲ့နာမည်ကြီးဒီဇိုင်နာဖန်တီးလိုက်ပါပြီ, နှင့်ကမ္ဘာထဲမှာလူအနည်းငယ်ရှိပါတယ်, detalek ဘာမှထံမှတည်ဆောက်ရန်ကြိုးစားခဲ့သူကို. သို့သော်ပထမတစ်ချက်မှာပင်ထိုကဲ့သို့သောအသေးအဖွဲအနုပညာရှင်များ, အဘို့, ပစ္စည်းခေတ်ပြိုင်အနုပညာလောကရှိအသစ်တစ်ခုကိုဦးတည်ချက်မှခြေလှမ်းတခုဖြစ်လာခဲ့ပါသည်. အမေရိကန် Neo-ပန်းပုဆရာနေသန် Sawaya - ထိုသို့သောယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်သီချင်းတွေကိုကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံးဖန်တီးသူတစ်ခုမှာ. ဤတွင်အမှုတော်တို့ကိုတချို့ရှိနေပါတယ်: Edvard Munch ရဲ့ "အော်သံ" ၏မျိုးပွား, အဆိုပါ Parthenon တစ်ဦးမိတ္တူနှင့်, နောက်ဆုံး, တစ်ဦး Tyrannosaurus Rex လေးမီတာအရိုးစု.
ဘယျလိုလုပ်, ကယ့်ပုံပဲ, သမားရိုးကျကြိုးသို့မဟုတ်ချည်? အဆိုတော်များပုံမှန်မဟုတ်သောဘေးထွက်နှင့်အတူဤအကျွမ်းတဝင်အိမ်ထောင်စုပစ္စည်းများဆီသို့ရောက် လာ. ,. သူတို့ဟာချုပ်သို့မဟုတ် လုပ်. ချယ်လှယ်ကြဘူး, နှင့်ရက်.
ဥပမာအားဖြင့်,, ဂျပန် Chiharu Shiota အခန်းပတ်ပတ်လည်ပစ္စည်းများအမျိုးမျိုးလှည့်ကွက် strands. ကြည့်ရှုသူအချို့အမှုတော်တို့ကိုအရမ်းလေးစားမိပါတယ်, အခြားသူတွေကသူတို့ကိုမှောင်မိုက်ခြင်းနှင့်ကြောက်စရာဖြစ်စဉ်းစားပါ. သို့သော်, ဒါဟာလစျြလြူရှုမတည်မနေပါဘူး. မက္ကဆီကန်ဂါဗြေလ Dave သက်တံ့မျှင်တစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကြီးစား installation ကိုဖန်တီး. သူ့အလုပ်ရေးသားသူကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အမိုးအကာများအတွက်လူ့လိုအပ်ချက်အပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်. နန်းကြိုးအမျှင်လေးများ၏ဖြစ်သူ Scott Hove, ကြိုး, bechevok, ကြိုး၏ဝဘ်အသင်းသားများ. သို့သော် Emil လောနိတျမွို့, ထိုကဲ့သို့သောပုံမှန်မဟုတ်သောပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်း, ဓါတ်ပုံတွေကိုဆွဲယူ. ရောင်စုံချည်သစ်သားဘုတ်၏ကျိူးသက်ရောက်မှုရှိလာမညျ့အစား, တစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်စိတ္တဇပုံစံများကို.
ဖော်ပြခဲ့တဲ့သာအနည်းငယ်အနုပညာရှင်တွေ. များစွာသောစာရေးဆရာတစ်ကမ်ဘာပျေါတှငျ, ယင်း၏မူရင်းတပ်ဆင်ခြင်းအတွက်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဖန်တီးပေးသော, ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးအပေါ်ထင်ဟပ်, သူတို့မထိကြောင်း.
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းသစ်, သင်တစ်ဦးလက်ရာသာသန်းကြွယ်သူဌေးများနှင့်အနုပညာစုဆောင်းကိုဝယ်ခြင်းငှါခွင့်ပြုထားတဲ့. kopipasta ယုဂ်အများအပြားကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောစျေးနှုန်းအမျိုးအစားအတွက်အနုပညာအကျင့်ကိုကျင့်၏ထုတ်လုပ်ခြင်း၏စိတ်ကူးမှာလတ်ဆတ်ကြည့်ဘို့ခွင့်ပြု.
ဒါဟာဘာလဲ. ပုံထဲကကန့်သတ်ထုတ်ဝေဒါမှမဟုတ်စက္ကူပေါ်မှာပုံနှိပ်ဖြစ်ပါတယ်, သို့မဟုတ်ပတ္တူပေါ်. ထို့ကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီအနေနဲ့မူရင်းကော်ပီကူး, ကြောင်း certified ရရှိထားပြီးဖြစ်ပါသည်.
လမ်းပေါ်ကအနုပညာအမျိုးအစားကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်စွယ်စုံများမှာ: အဆိုပါစာရေးဆရာကသူတို့ကျင့်သောအကျင့်ကိုတင်ပြဖို့မဖြောင့်ကြိုးစားနေကြတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ရဲ့ဂိမ်းထဲမှာပရိသတ်ကိုပါဝင်မှ. လမ်းပေါ်ကအနုပညာယခုအံ့သြစရာမရှိပါဖြစ်ပါသည် - အချို့ဖျက်ဆီးအဖြစ်မြင်, နှင့်အခြားသူများအထူးသဖြင့်အလုပ်ကြိုက်တယ်စဉ်းစားများနှင့်ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း. အနုပညာကမ္ဘာကအနုပညာရှင်တွေအတွက်အလွန်များစွာသောလူသိများတဲ့ထိုကဲ့သို့သောမူရင်းအမျိုးအစားမှာသူတို့လက်ကြိုးစားကြ, ဒါပေမယ့်အမည်မဖော်.
ဤအပုံရိပ်တွေအတွက်အဓိကအရာ - ဒီ idea က, ရေးသားသူပရိသတ်ကိုမှသိရှိစေရန်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်.
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကမ္ဘာ့, ဖန်တီးသောသူအနုပညာရှင်များ, အစစ်အမှန်အရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်လူနေမှုအမှုအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့, အဖြစ်ကအလွန်သေးငယ်တဲ့ယောက်ျားကို. Mirkov မယုံနိုင်လောက်အောင်ကွဲပြားခြားနားသည့်အကြောင်းအရာများ: အပြိုင်အဖြစ်မှန်, ဘဝအတွက်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝသို့မဟုတ်သာမန်အခိုက်. thumbnails င်း၏တိကျမှုအတွက်လေးစားကြသည်. တစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်စိတ်ကူးယဉ်နှင့်အတူမာစတာသေးငယ်တဲ့အာကာသအတွင်းအသက်တာ၏ဖြစ်ရပ်မှန်များဆောင်တတ်၏အထူးသဖြင့်အခါ,.
တချို့ကစာရေးဆရာများသာမန်စိမ်းဝါနုရောင်ပုဂြိုဟ်စက်ရုံသို့ကူးပြောင်း, အပင်နှင့်ပြည့်စုံသည်အခြားသေတ္တာ, သဲနှင့်လူများ, လူတို့သညျအဘို့တတိယ Fanta ပုလင်းစဉ် - vinogradinok ဖြည့်များအတွက်အပင်တစ်ပင်ဖြစ်ပါတယ်.
ခေတ်ပြိုင်အနုပညာကိုအနုပညာစင်တာများနှင့်ကောလိပ်များကျော်လွန်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်, ဒါဟာလုံးဝဆင်တူမဟုတ်ပါဘူး, ကြောင်းပြတိုက်အတွက်ပြသနိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်. နှင့်ဤသူအပေါင်းတို့သည်ကြီး, ကနယ်နိမိတ်ကိုဖန်တီးရန်မလိုအပ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့, နှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းအဆုံးမဲ့ဖြစ်ပါသည်. ထို့ကြောင့်အနာဂတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ ပို. ပင်ပုံမှန်မဟုတ်သောခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုမြင်ရဖို့မျှော်လင့်ထားသင့်ပါတယ်, မူရင်းအကျင့်ကိုကျင့်၏စာရေးဆရာများပရိသတ်ကိုမွေ့လျော်ပါလိမ့်မယ်များကြောင့်အရာမှ.